६ महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने सगरमाथाको प्रतिवेदन १ वर्षबित्दा पनि किन सार्वजनिक भएन? - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
६ महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने सगरमाथाको प्रतिवेदन १ वर्षबित्दा पनि किन सार्वजनिक भएन?
Posted by Jee | १४ जेष्ठ २०७७, बुधबार १५:५२ |
जेष्ठ १४, काठमाण्डौ- विश्वको सर्वाेच्चशिखर सगरमाथाको उचाई घटबढ भए/नभएको आधिकारिक जानकारी नेपाल र चीनले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गर्ने भएका छन् ।
नेपालले यसअघि नै शिखरमा सर्भेटोली पठाएको थियो भने चीनिया टोली बुधवार बिहान शिखरमा पुगेको छ । दुबै देशको सहमति अनुसार नै चिनियाँ सर्भे टोली सगरमाथाको उचाइ नाप्न शिखरमा पुगेको बताईएको छ । चीनतर्फको मोहडाबाट आरोहण गरेको टोलीले चुुचुरोमा पुगेर मापन लिएको चीनिया समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले जनाएको छ ।
नेपालले गत वर्ष पहिलो पटक आफ्नै स्रोतसाधनको उपयोग गर्दै विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ मापन गर्‍यो। नापी विभागका अधिकृतहरुको समूहले सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको थियो।
उचाई मापन पूरा गरेर गत वर्षको जेठ महिनामा सरकारी टोली काठमाडौं फर्किएको थियो। नापी विभागका प्रमुख अधिकृत खिमलाल गौतमको नेतृत्वमा गएको टोलीले सगरमाथाको चुचुरोमा १ घण्टाभन्दा बढी समय बिताएर अध्ययन गरेको थिए। ‘ग्लोबल न्याभिगेसन स्याटालाइट सिस्टम’ को प्रयोग गर्दै सगरमाथाको उचाई लिने काम भएको थियो।
सगरमाथामा संकलन गरिएको तथ्यांकलाई अध्ययन गर्दै ६ महिनाभित्रै सगरमाथाको उचाई निर्क्यौल गर्ने बताइएको थियो। तर, उचाई मापन गरेर फर्किएको एक वर्ष पुग्नलाग्दा समेत सरकारले उक्त सर्भेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन।
नेपालले सगरमाथाको उचाई अध्ययन गरेको करिब एक वर्ष पुग्नै लाग्दा चीनले पनि सगरमाथाको उचाई लिने अभियान अघि बढाएको छ। चीनले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने उत्तरी मोहडाबाट सगरमाथाको उचाई लिने काम गरिरहेको हो जसबारे नेपाल सरकारलाई आधिकारिक रुपमा कुनै जानकारी छैन।
मे २ मा उचाइ नाप्न गएका टोलीहरुबाट प्राप्त तस्विरहरु प्रकाशित गर्दै सीजीटीएनले ‘चोमोलुङ्गमा’ चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख गरेको थियो जसलाई उसले सच्याउँदै संसारको सबैभन्दा अग्लो शिखर भनेको छ। सगरमाथालाई तिब्बती भाषामा चोमोलुङ्ममा भनिन्छ।
चीनले सगरमाथालाई आफ्नो स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा रहेको बताएपछि नेपालको सामाजिक संजालमा यसको विरोध भएपछि सच्याइएको हो। यससँगै नेपालले सगरमाथाको उचाई मापन गरेको प्रतिवेदन कहाँ छ भनेर खोजिन थालेको छ।
गत असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा नेपाल र चीनका राष्ट्राध्यक्षहरुले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा सगरमाथाको उचाई संयुक्त रुपमा जारी गर्दै वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो। दुवै राष्ट्राध्यक्षहरुले ‘सगरमाथा नेपाल र चीनबीच मित्रताको प्रतिक’ रहेको बताएका थिए।
सी नेपाल आउनु अघि नै नेपालले सगरमाथाको उचाई मापन गरिसकेको थियो। तर, संयुक्त विज्ञप्तिमा सगरमाथाको उचाई मापन गरेर संयुक्त रुपमा नै उचाई घोषणा गर्ने सहमति भएसँगै नेपालले गरेको अध्ययनको निष्कर्ष निकाल्न ढिला भएको बताइन्छ।
उक्त सहमतिका अनुसार चीनले पनि आफ्नै तरिकाले सगरमाथाको उचाई मापन गरेपछि दुवै देशको सहमतिमा नयाँ उचाई घोषणा हुनेछ। चीनले केही दिनअघि मात्रै सगरमाथाको उचाईतिर लागेकाले उसको रिपोर्ट आउन अझै केही महिना लाग्न सक्छ। जसको प्रभाव नेपाली अध्ययनमा समेत पर्नेछ। चीनले अध्ययन नगरी नेपालले एकलौटी रुपमा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भएकाले पनि उचाई मापनको तथ्य सार्वजनिक नगरिएको सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन्।
नेपालले पहिलोपटक आफ्नै स्रोत र शक्तिको प्रयोग गर्दै उचाई मापन गरेको वर्ष दिन पुग्दा प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा चीनको दबाबमा उचाई सार्वजनिक नगरिएको भन्नेहरु पनि छन्। चीनले भर्खरै उचाई अध्ययन गर्न सुरु गरेको र संयुक्त विज्ञप्तिमा समेत दुवै देशले संयुक्त रुपमा उचाई घोषणा गर्ने ‘राजनीतिक सहमति’ कै कारणमा नेपालले पहिलो पटक आफ्नै स्रोतको प्रयोग गरेर तयार अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसकेको हो।
तर, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भने हाल अध्ययनको क्रममा संकलन गरिएका डाटाहरुको परीक्षण भइरहेकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिला भएको बताएको छ।
‘फिल्डमा गएर अध्ययन गरी ल्याइएका डाटा प्रोसेसिङको काम हुँदैछ। अहिलेसम्म त्यसको काम सकिन पर्थ्‍यो तर प्राविधिक कारणले ती कामहरु पूरा हुन सकेनन्। तर छिट्टै नै यो काम सकिन्छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले बताए।
हाल फिल्डको काम सकिएर प्रोसेसिङ भइरहेका डाटाहरुबाट प्राप्त विवरणलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसँग सल्लाह गरेरमात्रै उचाईको विषय फाइनल हुने उनले बताए।
‘यो त एउटा वैज्ञानिक कार्य हो। त्यसैले प्रोसेसिङ गरिरहेको कामलाई सम्पूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न हामी प्रयासरत छौं,’ उनले भने।
चीनले समेत सगरमाथाको उचाईको बारेमा अध्ययन गरिरहेको विषयमा उनले भने, ‘हामीले त्यस्तो कुरा सुनेका छौं। उहाँहरुले उत्तर मोहडाबाट आफ्नै तरिकाले अध्ययन गरिरहनु भएको होला। दुई राष्ट्रपतिबीच संयुक्त रुपमा उचाई घोषणा गर्ने सहमति पनि भएको थियो। त्यसमा के भएको छ विस्तृत कुराहरु आएको छैन।’
२०७२ सालको भूकम्पपछि सगरमाथाको उचाईमा घटबढ भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। चीनले भूकम्प अघि नै सगरमाथाको उचाई घटेको दाबी गरेको थियो। तर, नेपालले भने सगरमाथाको उचाई पहिला झै ८ हजार ८ सय ४८ मिटर नै रहेको दाबी गर्दै आएको छ।
Previousरुकुमघटना: छानविन आयोग गठन हुने
Nextकोरोनाअध्यावधिक: अहिलेसम्म ६ को मृत्यु, १२ शय १२ सङ्क्रमित
मोर्चाले भन्यो-राजनितिक आधारमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता ! आज दिउँसो १ बजे मार्चाको बैठक बस्दै
२ चैत्र २०७३, बुधबार ०८:३०
अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासा बृहस्पति ग्रहमा नयाँ उपग्रह पठाउन सफल
२१ असार २०७३, मंगलवार १२:१७
प्रधानमन्त्री दाहालद्धारा देशवासीका नाममा सम्बोधन सुरु ! (लाइभसहित हेर्नुहोस)
२३ भाद्र २०७३, बिहीबार ११:५३
ललितपुर महानगरपालिकाको मतगणनामा विवाद ! बढी मत देखिएपछि एमालेले गर्यो बहिस्कार
५ जेष्ठ २०७४, शुक्रबार १३:००